Waa sidee xaaladda carruurta derbijiifka horay u ahaa ee lagu xanaaneeyo Bosaso (dhegayso) – Radio Daljir
Waa sidee xaaladda carruurta derbijiifka horay u ahaa ee lagu xanaaneeyo Bosaso (dhegayso)
Noofember 5, 2018 9:35 b 0
Radio Daljir ayaa maanta booqday xarunta lagu dhaqan celiyo caruurta derbijiifka ah ee magaalada Bosaaso, waxna lagu baro.
Xaruntan ayaa waxaa la aas aasay sanadkii 2011kii ,iyadoo caruurtii lagu bilaabay xaruntan 7 sano ka hor maanta ay noqdeen macalimiin caruurtan dib wax ubara qaar koodna ka shaqeeya goobaha ganacsiga ee magaalada Bosaaso .
Xaruntan ayaa waxaa horay u soo food saartay xaalad nolol xumo ,waxayna qarka u saarneed in albaabada loo xiro balse radio Daljir oo dhowr jeer gurmad qaylo dhaan ah u sameeyay caruurtan ayaa waxaa suurta gashay in bulshada qayba heda kala duwan ay u soo gurmato , noloshii hore ee caruurtana ay wax iska badaleen.
Hadaba wariye Maxamuud Cabdi Ibraahin ayaa warbixintan ka diyaariyay .
Cadaado iyo heerka Nadaafad xumada magaalada oo laga deyriyay (dhegayso)
Maxaa lagu haystaa Nabadoon Xarago (dhegayso )